Wada hadallo xasaasi oo ka dhacay Villa Somalia iyo xubno IGAD ah oo loo diiday inay galaan madaxtooyada. - Caasimada Online
Home Warar Wada hadallo xasaasi oo ka dhacay Villa Somalia iyo xubno IGAD ah...
Wada hadallo xasaasi oo ka dhacay Villa Somalia iyo xubno IGAD ah oo loo diiday inay galaan madaxtooyada.
Maanta magaalada Muqdisho waxaa gaaray wafdi ka socday Uru Goboleedka IGAD oo isugu jira Soomaali iyo Shisheeye , waxaana wafdiga uu ahaa Kuwa ku mahsquulsan Maamul u sameynta Jubooyinka.
Wafdiga marki hore waxaa loo sheegay in madaxweynaha aysan la kulmi doonin , waxaana lagu wargaliyay kooxda Muqdisho gaartay inay isaga baxaan magaalada oo aan loo fasixi doonin Xafiiska madaxweynaha.
Gudiga waxaa ay ahaayeen Soomaali iyo IGAD , waxaana madaxweynaha uu qaabilay wafdigii Soomaalida ahaa , isagoo Xubnihii IGAD ka socday loo diiday inay galaan xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa xogheyntiisa u sheegay inan loo soo fasixin madaxtooyada Xubnaha IGAD ka socda , wuxuuna dalbaday inuu la kulmayo kuwa Soomaalida ah , iyadoo loo ogolaaday Soomaalida inay galaan aqalka madaxtooyada Soomaaliya.
Hadaba wafdigii Soomaalida iyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulan dheer qaatay , waxaana ay ku falanqeeyeen maamul u sameynta Jubooyinka iyo Kisimaayo.
Saraakiisha gudiga farsamada ka socotay ee madaxtooyada tagtay ayaa waxaa kamid ah Muqtaar Dheer, waxaana madaxweynaha uu ka waraystay sida ay wax udoonayana.
Gudiga farsamada ayaa sheegay in ay ku qanacsan yihiin howsha ay IGAD hormuudka ka tahay ee maamulka loogu samaynayo Jubooyinka dowlana ay kaalinteeda ka qaadato.
Madaxweynaha Dowlada Soomaaliya ayaa u sheegay wafdiga in waxa ay wataan ay tahay mid aan suuragal ahayn , isagoo ku adkeystay in maamul u sameynta Jubooyinka iyo Kismaayo ay xaq u leedahay Dowlada Soomaaliya iyo shacabka ka soo jeeda halkaasi.
Xasan Sh Maxamuud ayaa la soo sheegayaa in uu af cad ugu sheegay Wafdiga inuusan aqbali doonin Maamul uusan isaga soo dhisin , wuxuuna warbixinadii ay wateen uu dib ugu celiyay wafdiga kulanka la qaatay.
Madaxweyna Soomaaliya ayaa waxaa arinta Kismaayo ku qabsatay Golaha Baarlamaanka , iyadoo madaxweynaha laga sugayo qodobo badan oo ay ugu horeyso Cida Kismaayo iska leh , Kenya ma amisom baa msie waa duulaan iyo dhulbaarsbi iyo sababti wafdiga Dowlada looga soo celiyay Kismaayo.
Su’aalahaas oo dhan madaxweynaha oo ak duulaya ayaa wafdiga IGAD maanta ku hilmaamay kursiga keydka , isagoo ka dalbaday inaysan imaan xafiiskiisa.